Kooxda Chelsea oo ka jawaabtay kacdoonka Thibaut Courtois – Gool FM
Kooxda Chelsea oo ka jawaabtay kacdoonka Thibaut Courtois
Dajiye August 7, 2018
(London) 07 Agoosto 2018. Chelsea ayaa jawaab ka bixisay kacdoonka goolhaayaheeda Thibaut Courtois, ka dib markii uu cudur daar la’aan seegay maaalintii labaad ee xiriir ah tababarka Blues.
Sida laga soo xigtay idaacada “BBC” Chelsea ayaa go’aansatay in Thibaut Courtois ay ku ganaaxdo qiimo dhan 200 kun ginni, sababa la xiriira inuu si cudur daar la’aan kaga maqnaa tababarka kooxda mudo laba maalin xiriir ah.
Sidoo kale wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Thibaut Courtois uu wali ku sugan yahay dalka Belgium xili dhamaan xidiga Blues ay isku diyaarinayaan tababarka ay ugu diyaar garoobayaan kulamada xili ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League.
BBC-da ayaa sidoo kale sheegtay in Thibaut Courtois uu ku ciriirinayo maamulka kooxda Chelsea in ay u ogolaadaan u dhaqaaqista Real Madrid kahor inta uusan xirmin suuqa xagaaga.
Thibaut Courtois oo Cudur daar la'aan uga maqan tababarka Chelsea maalintii labaad oo xiriir ah
“Waxaan doonayaa in markale aan wada shaqeyno Mourinho”… mid ka mid ah xidigaha Chelsea oo fariintan diray